China Mobile Wood ahịhịa Chipper factory na-emepụta | Opps Group
Gịnị mere a OPM Wood Chipper?
The akụkụ kasị mkpa nke osisi chipping usoro bụ na-enweghị obi abụọ ọ bụla, dị irè ma nọrọ ná nchebe na-oriri nke osisi na chipper. All ụdị na OPM nso ahu nagide ihe na-oriri na ike ike vetikal rollers, na-eme ha kasị mma na klas, ma nnukwu ma ọ bụ obere, na ga mpi mma mgbe niile.
Effitiveness na ikike
The elu na-oriri usoro ọnụ na n'ozuzu siri ike constructuction nke --- Chippers, na ọtụtụ ojiji nke Hi-Tensile ígwè, secures irè, nnukwu ike na anwụ ngwa ngwa.
Arụmọrụ bụ nọmba onye kacha mkpa maka NHS ngwaahịa. Ezere njikwa nke osisi, mgbawa ha dị ka dum osisi na alaka, ozugbo n'ime oké ọhịa, na anyị nke ukwuu mobile osisi chippers.
Ọrụ enyi na enyi na nchebe.
Machines na rụọ ọrụ nke ọma na-adị mfe ịṅụ kwa ụbọchị ihe aga-eme, na-aghọta na-ọrụ enyi na enyi. N'otu oge ahụ, OPM nke nwetara a mma na ezi na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, iji zere na-atụghị anya agha na-atụghị mmegharị maka ọrụ.
Nke ezigbo nhọrọ dị mkpa.
Isi ihe na-aga nke ọma bụ nri oke nke igwe. Na anyị amacha mkpara, ihe karịrị afọ 25 nke ahụmahụ na nso kọntaktị na anyị na ndị ahịa, OPM bụ nri oke nke ibe.
Ọfọn Nwara oru ngwọta na innovations.
OPM e developping na-amị osisi chippers ruo ọtụtụ afọ. Anyị igwe iso nke ọma na-anwale mmiri na otutu ngwọta, nke ga-erite uru anyị ahịa.
Service na ahịa kọntaktị
Anyị ọma zụrụ azụ na ọrụ na-arụ ọrụ na-e ka enyemaka ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eme ma ọ bụ ma ọ bụrụ na a nsogbu na-adị. Anyị nwere na-achọ ịbụ nso anyị ahịa, iji nye ha na-aza na ngwọta dị ka ngwa ngwa o kwere omume.
Ihe niile n'okpuru otu ụlọ
Anyị elu-tech mmepụta eweta, nke na-ejikwara site ọma zụrụ azụ na ahụmahụ anya, ana achi achi a quality mmepụta nke akụkụ na mmiri na creat pụrụ ịdabere na na oru oma ígwè ọrụ.
Mgbawa quality bụ ọkaibe:
The mgbawa quality si anyị n'aka-nri na ígwè ọrụ dị nnọọ mma na edo, na ike ga-eji na na kasị mgbawa / stoker ji esi mmiri ọkụ na-enweghị optionals.
The mgbawa quality maka kreenu igwe osobo niile chọrọ maka ulo oru osisi ibe, ya mere nwere ike a ga-ere ozugbo na kpo oku na ike osisi.
E nweghị nnyefe n'akụkụ ke oriri
Always onye dị ike haịdrọlik moto kwa na-oriri ala na kpọmkwem traction na ala.
The yiri nduzi ibughari na-oriri ala enwekwu itinye n'ọrụ nke na-apịpụta mgbali n'ụzọ.
Ibughari na-oriri ala na-arụ ọrụ yiri nke flywheel.
Onye ọ bụla na-oriri ala nwere 8 claws na 4 knives. The claws ịnọgide na-enwe a ike adịgide nke osisi na alaka. The mma egbupu alaka iji maka alaka n'ogige atụrụ tinyere log mfe n'oge oriri usoro dị ka nke ọma, mgbe idebe infeed rollers ọcha n'otu oge.
Extremly ala wear na infeed apụta
Pụrụ iche a haziri na infeed rollers insures ntakiri ọ slippage
Oké ọrụ biarin na ọma ezi flywheel maka ogologo ndụ.
Mma na-agbanwe ngwa ngwa.
Otu onye nwere ike ịgbanwe knives na anvils n'otu oge dị ka ọ na-eme visual nnyocha.
6 lubrication ihe, 4 biarin na na na-na ndepụta rollers na 2 yiri ihe nkiri slide maka ibughari na-oriri ala + PTO aro
All OPM chippers nwere ike serviced na ọkọlọtọ n'aka ngwaọrụ.
Clamping pressurre nke na ndepụta rollers nwere ike gbanwere n'oge chipping
1000-ihe ibu na ndị ọzọ na-achọ ihe aga-eme.
Hydaulic odide-oriri usoro
High Pressure mmanụ nyo
PTO aro w / esemokwu na jupụtara ná ipigide (bụghị M-ụdị)
4 PC nke obi tara mmiri knives
C-nlereanya naanị 1000rpm
A siri ike na-agbanwe chipper na-ọma mara OPM na-oriri usoro, nwere hydraulically chụpụrụ, agressive vetikal na-oriri rollers.
N'agbanyeghị ya elu ikike, elu tensile ígwè ebelata n'ozuzu ibu nke igwe
The iyuzucha tube bụ 360 ogo rotatable-stepless
The chipping ogologo bụ mgbanwe site 7-15mm
220c-litle kreenu igwe na nnukwu ike-use igwe ikike na ọnụ ọgụgụ kasị elu arụmọrụ na kacha nkasi obi na nchebe.
A n'ezie niile rounder ọbụna n'ihi arọ aga-eme.
1500-N'ihi nnukwu achọ ihe aga-eme.
300 bụ ma eleghị anya ike n'aka eriju afọ igwe na ahịa. Ọ bụ hydraulically-chụpụrụ, ike ike vetikal na-oriri rollers na ya kọmpat imewe, na-eme ka a a ọrụ na onye-enyi na enyi na nnọọ oru oma chipper. N'agbanyeghị ya elu ikike na ike, elu tensile ígwè ebelata n'ozuzu ibu nke igwe.
The iyuzucha tube bụ 360 ogo -stepless.
The chipping ogologo bụ mgbanwe site 10-15mm
Eleghị anya ike n'aka nri chipper na akara.
dizel Engine Yuchai Yuchai
Total Power 90KW (120hp) 180KW (240hp)
Mmanụ dizel dizel
Bottom Agụba (PC) 1 1
uzo mmiri size (mm) 440x360 500x500
Wood Oke dayameta (mm) 250 300
Tinyekwa paseeji Elu (mm) 2700 2700
Tinyekwa paseeji adiana n'akuku 3600 3600
Ibe size (mm) ≤ 30 ≤ 30
wheel sọrọ wheel sọrọ wheel
Ike (t / h) 5-8 8-10
Dimension (LxWxH) (MM) 3800x1600x2700 4500x2100x3000
Ibu (t) 2.8 4.2
Previous: Ụlọ ihe igwe ihe
Next: Large n'ọtụtụ Hay tub grinder
Plastic Granulator , Msw mmako , Granulator , Tree Shredder , Rdf Mmanụ , ala Mill ,